Sida loo cusbooneysiiyo Instagram Talaabooyin yar ▷ ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sida loo cusbooneysiiyo Instagram dhowr tallaabo
October 15, 2020 0 comments 568
Marka xigta waanu ku bari doonaa sida loo cusboonaysiiyo instagram habka ugu fiican, mid ka mid ah shabakadaha bulshada ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka, taas oo si joogto ah u soo saarta cusbooneysiin lagu hagaajinayo tayada adeeggeeda.
Sidee loo cusbooneysiiyaa Instagram?
Guusha ay calaamadda Instagram gaartay waa mid aan la inkiri karin, daliil tan waxaa ka mid ah in ka badan 850 milyan oo adeegsade oo ka isticmaalaya taleefannadooda gacanta ama kumbuyuutarradooda.
Asal ahaan, codsigan waxaa loogu talagalay in lagu isticmaalo qalabka Iphone iyo Ipad, tan 2010, gaar ahaan dhammaadkeeda.
Ka dib, nooca mobilada ee nidaamyada Android ayaa la daabacay ka dibna nooca Windows Phone wuxuu dhashay 2013.
Shaqada shabakada bulshada waxaa lagu go'aamiyaa awooda ay leeyihiin soo saareyaasheeda si ay u abuuraan cusbooneysiin hagaajineysa isla markaana sare u qaadeysa adeegga iyo khibrada isticmaale.
Ujeedada cusbooneysiin kasta waa in la yareeyo inta ugu badan ee suurtogalka ah qaddiyadaha khaladaadka ama guuldarrooyinka ka dhici kara masraxa waqti go'an, iyo sidoo kale hal-abuurnimo suuqa dhexdiisa ah.
Cusbooneysiin kasta waxay dhexgashaa astaamo kala duwan, tusaale ahaan, haddii aad isweydiiso Sidee loo cusbooneysiiyaa koontadayda 'Instagram' o Sidee loo cusbooneysiiyaa quudintayda barta Instagram?, jawaabta waxay u egtahay in laga heli doono cusbooneysiin.
Baro sida loo cusbooneysiiyo Instagram-ka iPhone
Haddii qalabkaagu yahay Iphone, meesha lagaaga baahan yahay inaad ka cusbooneysiiso bartaada 'Instagram' waxay ka timaaddaa isla meeshii aad markii ugu horraysay ka soo degsatay codsiga, App Store.
Markaad gasho dukaanka oo aad heshid arjiga, waxaad si fudud ku garan kartaa haddii cusbooneysi cusub jiro maxaa yeelay waxaad heli doontaa ikhtiyaarka aad ku cusboonaysiin karto.
Haddii kale, xulashooyinka la heli karo waa in la tirtiro arjiga ama la furo. Hab kale oo lagu xaqiijiyo haddii uu jiro cusbooneysiin sugaysa ayaa ah inaad gasho qaybta "Cusbooneysiinta".
Dhammaan cusbooneysiinta loo heli karo codsi kasta oo aad haysato ayaa ka muuqan doona halkan. Caadi ahaan, calaamadda in cusbooneysiinta la heli karo waa goobaabin cas.
Goobaabintani waxay u muuqataa midig dukaanka, iyo sidoo kale goobta arjiga waxaana lagu daraa hal ama in kabadan oo lambar ah oo tilmaamaya tirada cusbooneysiinta la heli karo.
Waxa kale oo aad dooran kartaa inaad qaabeeysid arjiga si markasta oo cusbooneysiin ah la sii daayo, ay kuugu soo gaarto dukaanka si otomaatig ah adigoon u baahnayn inaad raadiso.
Ka cusbooneysii Android
Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad furtaa dukaanka Google Play, xulo badhanka ku yaal bidixda kore, oo ay metelaan saddex sadarro qaro weyn.
Marka ikhtiyaarrada la soo bandhigo, geli midka dhaha "Barnaamijyadayda iyo cayaarahayga", halkaas ayaad ka daawan kartaa dhammaan codsiyada lagu rakibay qalabkaaga.
Xulo Instagram, haddii uu jiro cusboonaysiin cusub oo la heli karo, waxaad arki doontaa batoon ay ku qoran tahay erayga "Cusbooneysiin" oo ku xigta kan ay ku qoran tahay "Uninstall."
Haddii aysan jirin wax cusbooneysiin ah oo la heli karo, sida kiiskii hore, xulashada soo muuqan doonta waxay noqon doontaa "Furan". Marka cusbooneysiinta la soo dejiyo, waxaad arki doontaa sida baarku u kordhayo si tartiib tartiib ah illaa hawshu dhammaato.
Waxaa suurtagal ah in nooc cusub uu u baahan yahay aqbalaadda rukhsadaha cusub, haddii ay dhacdo inaadan aqbalin, ma awoodi doontid inaad adeegsato cusbooneysiinta. Marka hawshu dhammaato, badhanka saxda ah ee u muuqday inuu cusboonaysiinayo, wuxuu siinayaa ikhtiyaarka ah inuu furo arjiga.
Cusboonaysii Instagram on Windows Phone
Sida nidaamyada kale ee hawlgalka, Windows wuxuu leeyahay dukaan codsi u gaar ah, halkaas waxaad ka soo dejisan kartaa oo ka cusbooneysiin kartaa Instagram.
Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad galiso dukaanka oo aad ku qor magaca shabakada bulshada ee mashiinka wax raadinta si aad ugu heli kartid si fudud oo fudud.
Marka cusbooneysiin la heli karo, calaamad ayaa ka soo muuqan doonta arjigan agtiisa iyada oo isla qoraalkan ah. Xulashada "Cusboonaysiinta" ikhtiyaarka ayaa isla markiiba bilaabi doonta soo dejinta.
Marka waxyaabaha cusub lagu rakibo qalabkaaga, waxaa laga yaabaa inaad dib u bilowdo qalabka si cusbooneysiintu si sax ah u rakibto. Hadda waad ogtahay sida loogu cusbooneysiiyo Instagram Windows Phone.
Isku duub sida loo cusbooneysiiyo Instagram Instagram kombuyuutarka
Hadaad rabto inaad ogaato sida loo cusbooneysiiyo Instagram-ka kombuyuutarkaWaa inaad ogaataa inaysan u baahnayn wax cusbooneysiin ah, maadaama aad u adeegsanayso shabakaddan bulsheed tan, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad gasho degelkeeda.
Faa'iidada weyn ee kujirta soo galitaanka barxadda qaabkan ayaa ah in maadaama aan si toos ah u gali doonno degelkii asalka ahaa, had iyo jeer waxay noqon doontaa mid cusbooneysiiya iyo isbeddelada ugu dambeeya.
Ka tirtiro barnaamijka Iphone iyo Android
Marar badan ayay dhacdaa markii la rakibayo cusbooneysiin cusub, waxaa jira khaladaad la xiriira arjiga oo aan horay u jirin. Hal ikhtiyaar oo aad isku daydo inaad ku saxdo khaladka waa inaad ka saarto dalabka.
Xaaladda aaladda iPhone, habka ugu fudud ee looga saari karo Instagram waa inaad riixdo oo aad haysato astaanta dalabka dhowr ilbiriqsi.
Markaad fuliso ficilkan, "X" ayaa ka soo muuqan doona geeska kore ee midig ee astaanta, waa inaad gujisaa oo farriin ayaa soo muuqan doonta iyada oo lagu weydiinayo haddii aad runtii rabto inaad fuliso falka iyo in kale.
Markaad rabto inaad ka tirtirto Instagram-ka 'Android', waxaad gelaysaa Play Store oo aad doorataa badhanka siinaya ikhtiyaarka ah in meesha laga saaro shabakadda bulshada.
Markaad maamusho inaad tirtirto barnaamijka, dib u bilow qalabkaaga ka dibna dib ugu cusbooneysii dukaanka arjiga ee mobilkaagu ku siiyo.
Qaar ka mid ah wararka iyo cusbooneysiinta Instagram 2020
Instagram waxay keentay war aad u wanaagsan sanadkaan, waa kuwan liistada kuwa ugu waaweyn, sidaa darteed waad ku raaxeysan kartaa.
Isla mar ahaantaana laga sii daayo Instagram iyo Facebook
Mideynta udhaxeysa labadan codsi ayaa si isa soo taraysa u muuqata, kaliya maahan inay ka tirsan yihiin hal qof, laakiin ikhtiyaarka ah in fiidiyoowga tooska ah loogu gudbiyo labada barxadood ayaa hadda la awooday.
Mid ka mid ah cusbooneysiinta weyn ee Instagram ay hirgelisay sannadkan waa is-iibsiga si aad u awoodo inaad wax ku iibsato oo ku bixiso habkan.
In kasta oo hadda laga heli karo oo keliya Maraykanka, haddana shirkaddu waxay ballanqaadday inay ku fidinayso adduunka oo dhan, sidaas awgeedna u xaglinayso ganacsiyada waaweyn iyo kuwa yaryar.
Dukaameysiga 'Instagram' waxaa loo isticmaali karaa in lagu kabo iibka dukaankaaga internetka oo xitaa loola mid noqdo, kuwa aan weli haysan.
Xarfaha warqadaha cusub
Waxyaabaha cusub ee soo kordhay waxaa ka mid ah 9 nooc oo nooc ama noocyo kala duwan ah, kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad ku abuurto Sheekooyin leh naqshad iyo tayo wanaagsan
Cabir kale oo laxiriira sheekooyinka waxay kuxirantahay rabitaanka shirkada inay hindiso qaab cusub oo sheekooyinka loo fiirsado.
Instagram waxay ku taameysaa in mustaqbalka sheekooyinka ay hanan karaan shaashadda oo dhan halkii lagu diyaarin lahaa baarka sare, sida hadda jirta.
Adeegga cusub ee 'Reels' waa midka kale ee ay Instagram soo bandhigto si looga takhaluso caannimada loona gaaro TikTok sannadihii la soo dhaafay.
Waxay kuu oggolaaneysaa inaad abuurto, wadaagto oo aad soo ogaato fiidiyowyo gaagaaban oo 15 ilbidhiqsi ah oo dherer ah, oo aad ku darto maqal, qalab iyo saamayn xiiso leh.
Horay waa run in la awoodo in la muujiyo ilaa seddex faallooyin barta Instagram, waa suurtagal in la doorto dejintooda, ha ahaato iyaga ama qof kale, illaa inta ay ku jiraan daabacaadaada.
Dejinta faallo togan oo ku saabsan mid ka mid ah qoraaladaada ayaa kaa caawin doonta inaad siiso qiime, iyo sidoo kale hagaajinta isdhexgalka aad la leedahay kuwa raacsan ee ku arki doona faallooyinkooda qeybta sare ee daabacaadda.
Naqshadaynta quudinta cusub
Ka fikirida hore, Instagram waxay tijaabineysaa isku dhafka tab cusub ee quudinta, kaas oo heli doona magaca "Lagu taliyay qoraallada la soo jeediyey."
Tani waa habka ay shirkaddu u doonayso inay ku dhiirrigeliso xiriirka u dhexeeya adeegsadayaasheeda. Tabku wuxuu u muuqan doonaa agtiisa qoraallada horay loo daawaday.
Xiriirinta udhaxeysa Instagram iyo fariinta Messenger
Waxaa la filayaa in cusbooneysiinta cusub, ikhtiyaar ayaa ka dhex muuqan doona goobaha barnaamijka kaas oo kuu oggolaanaya inaad daawato macluumaadka fariinta Instagram ee Facebook iyo tan kale.
Hal-abuurnimadan cusub waxay fududeyneysaa isku xirnaanta u dhexeeya isticmaaleyaasha labada shabakadood ee bulshada, iyada oo aan loo baahnayn in la galo ama laga baxo mid ama kan kale.
Waxaan kaaga tagay fiidiyowgan si aad u aragto 15-kan war ee ka socda Instagram, ma awoodi doontid inaad joojiso araggiisa.
Xaqiiqdii waad xiiseyn doontaa inaad aragto qoraalkeena Sidee fur una xisaabta en Instagram by hordhac waqtiga, haddii ay sidaas tahay, waa inaad gashaa cinwaanka aan ka tagay.
1 Sidee loo cusbooneysiiyaa Instagram?
1.1 Baro sida loo cusbooneysiiyo Instagram-ka iPhone
1.2 Ka cusbooneysii Android
1.3 Cusboonaysii Instagram on Windows Phone
1.4 Isku duub sida loo cusbooneysiiyo Instagram Instagram kombuyuutarka
2 Ka tirtiro barnaamijka Iphone iyo Android
3 Qaar ka mid ah wararka iyo cusbooneysiinta Instagram 2020
3.1 Isla mar ahaantaana laga sii daayo Instagram iyo Facebook
3.2 Iibsashada barnaamijka
3.3 Xarfaha warqadaha cusub
3.5 Muuji faallooyinka
3.6 Naqshadaynta quudinta cusub
3.7 Xiriirinta udhaxeysa Instagram iyo fariinta Messenger
Sida loo furo koonto Instagram markii ugu horeysay
Dhagaystayaashaadu ma isticmaalaan Quudin dheeri ah ama Sheekooyin?